साधारणसभामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव : साधारण र विशेष प्रस्ताव पारित हुने प्रक्रिया | गृहपृष्ठ
Home लेख | दृष्टिकोण साधारणसभामा प्रस्तुत हुने प्रस्ताव : साधारण र विशेष प्रस्ताव पारित हुने प्रक्रिया
एकल कम्पनी बाहेक अन्य कम्पनीले साधारणसभा बोलाउनुपर्छ । शेयरधनीले आफ्नो हकअधिकार प्रयोग गर्ने तथा आवश्यक पर्दा मतदान गर्न पाउने ठाउँ साधारणसभा हो । कम्पनीले साधारणसभा कुन प्रयोजनका लागि बोलाएको हो भन्ने कुरा छलफल हुने विषय स्पष्ट गरेको हुन्छ । साधारणसभामा पेश गरिने छलफलका विषयहरू प्रस्तावका रूपमा पेश गरिन्छन् । पेश भएका विषयमा उपस्थित शेयरधनीहरूले छलफल गर्छन् । छलफलपछि प्रस्तावहरू पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने शेयरधनीको मतमा आधारित हुन्छ । बहुमतले समर्थन गरे वा नगरेका मतलाई नै निर्णय भनिन्छ । यस्तो मत ध्वनि, शेयरधनीहरूको समूह विभाजन, मतपत्र लगायत अध्यक्षले तोकेको प्रक्रियाका आधारमा निर्णय हुन सक्छ ।
प्रस्तावलाई दुई वर्गमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
१. सामान्य प्रस्ताव
सामान्य प्रस्ताव सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूको बहुमतले पारित गर्न सक्छ । कम्पनी ऐनले विशेष प्रस्तावका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाहेकका विषयहरू सामान्य प्रस्तावको रूपमा पेश गर्न सकिन्छ । सामान्य प्रस्तावका विषयहरू :
(क) सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
(ख) लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको आ.व.असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण पारित गर्ने ।
(ग) सञ्चालक समितिद्वारा प्रस्तावित लाभांश स्वीकृत गर्ने ।
(घ) लेखापरीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक तोक्ने ।
(ङ) सञ्चालकको निर्वाचन
कम्पनीलाई गम्भीर असर पर्न सक्ने विषयहरू विशेष प्रस्तावका रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूमध्ये ७५ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र सो प्रस्ताव सभाद्वारा स्वीकृत भएको मानिन्छ । साधारणसभामा पक्ष र विपक्षमा मत बराबर भएमा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन पाउँछ । (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४ (४)
देहायका विषयहरू विशेष प्रस्तावका रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ८३)
क) कम्पनीको अधिकृत पूँजी बढाउने विषय, (ख) कम्पनीको शेयर पूँजी घटाउने वा हेरफेर गर्ने विषय,
(च) कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले खरीद गर्ने विषय,
(छ) डिस्काउन्टमा शेयर विक्री गर्ने विषय,
(झ) कम्पनी ऐन वा नियमावलीमा कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने भनिएका अन्य विषय ।
प्रस्तावमा पाउने मत : साधारणसभामा पेश भएका प्रस्तावमाथि शेयरधनी आफै वा आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत एक शेयर बराबर एक मतका आधारमा मतदान गर्नसक्छ । शेयरधनीले आफूले शेयर किनेको अनुपातमा मत खसाल्न पाउँछ ।
प्रस्ताव उपर निर्णय : साधारणसभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्ने र निजको अनुपस्थितिमा सञ्चालकहरूले आफूमध्येबाट मनोनीत गरेको व्यक्तिले गर्ने व्यवस्था छ । सभामा पेश भएका प्रस्ताव पारित भए वा नभएको भन्ने राय संकलन गर्ने प्रक्रिया निर्धारण गर्ने अधिकार सभाका अध्यक्षलाई हुन्छ । प्रस्ताव पारित भए नभएको घोषणा पनि अध्यक्षले गर्छ । सभामा शेयरधनीले मतदान गरेको बहुमतको रायलाई सभाको निर्णयका रूपमा अभिलेख गरिन्छ । सभामा पेश भएका प्रस्ताव पारित भए नभएको राय लिँदा विभिन्न प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ । यसमा शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिहरूलाई हात उठाउन लगाई, ध्वनिमत, शेयरधनीहरूको समूह विभाजन, मतपत्रको प्रयोग लगायत अन्य उपयुक्त प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ ।
सञ्चालक निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्ताव
सामान्य प्रस्ताव अन्तर्गत सञ्चालकको निर्वाचन गर्दा सञ्चालक समितिले निर्वाचन निर्देशिका तयार पारी निर्वाचन गराउन निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गर्छ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रकाशित गर्छ । सञ्चालकको निर्वाचन शेयरधनीको मतदानबाट हुन्छ । मतदान गर्दा नियमावलीमा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर संख्याले नियुक्त गर्नुपर्ने सञ्चालकको संख्यालाई गुणन गर्दा हुने संख्या बराबरको मतका हिसाबले मतदान गर्न सकिन्छ । त्यसरी मतदान गर्ने शेयरधनीले आफ्नो सबै मत एउटै उम्मेदवारलाई वा एकभन्दा बढी उम्मेदवारलाई निजले तोके बमोजिम विभाजन हुने गरी गर्न सक्छ । अर्थात् कुनै कम्पनीमा ५ जना सञ्चालक पदका लागि निर्वाचन गर्नुपर्ने रहेछ । ६ जना शेयरधनीले उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा शेयरधनीले कति मत दिन पाउने भन्ने प्रश्न खडा हुन सक्छ । मत कति पाउने भन्ने सम्बन्धमा कुनै शेयरधनीको १० शेयर रहेछ भने उसले ५ जना सञ्चालक छान्न पाउने हुँदा १० शेयरलाई पाँचले गुणन गर्दा ५० मत राख्न पाउँछ । उक्त मत एकै जना उम्मेदवारलाई वा अगअलग उम्मेदवारलाई बाँडी मतदान गर्न सक्छ । (कम्पनी ऐन २०६३को दफा ७२(१) ।
अन्य व्यवस्थाहरू :
छलफल गर्ने प्रस्ताव शेयरधनीलाई सूचित गर्नुपर्ने : कम्पनी ऐनले साधारणसभामा छलफल हुने विषयहरू अर्थात् प्रस्तावहरू शेयरधनीलाई पहिले नै सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामा पेश गरिने प्रस्तावको अग्रिम जानकारीका आधारमा शेयरधनीले प्रस्ताव उपर विचार गर्ने पर्याप्त समय पाउँछ र पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने आफ्नो धारणा बनाउन सक्छ ।
पब्लिक कम्पनीले साधारणसभा कुन प्रयोजनका लागि बोलाएको हो सो सम्बन्धी सूचना वार्षिक साधारणसभा भए २१ दिन अगावै र विशेष साधारणसभा भए १५ दिन अगावै सभा हुने स्थान, मिति, छलफल गर्ने विषय अर्थात् एजेन्डाका रूपमा सामान्य प्रस्ताव तथा विशेष प्रस्ताव समेतको सूचना शेयरधनीलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै यस्तो सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रपत्रिकामा दुईपल्ट प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ६७ (२)
प्रस्तावमा शेयरधनीको राय : साधारणसभामा छलफल गरिने सबै विषय प्रस्तावका रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्ताव पारित भए वा नभएको कुरा सो सभाको अध्यक्षले घोषणा गर्छ । (कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७४(२))।
मतदान गरिएको प्रत्येक विषयमा सभाको बहुमत शेयरधनीको रायलाई सो सभाको निर्णय मानिनेछ ।
सूचित नगरिएका विषयहरूको प्रस्तावमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्था : साधारणसभामा छलफल हुने विषय पहिले नै सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही अवस्थामा पहिले नै सूचित नगरिएका विषयमा पनि साधारणसभाले निर्णय गर्न सक्छ । यसका लागि साधारणसभामा मतदान गर्न पाउने कम्पनीको जम्मा शेयरको ६७ प्रतिशत शेयरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरू स्वयं वा प्रतिनिधि मार्फत उपस्थित भई कुनै विषयमा निर्णय लिने पक्षमा मतदान गरेमा, स्थगित भएको कुनै साधारणसभामा छलफलको निमित्त सूचित गरिएको कुनै विषय भएमा यसो गर्न सकिन्छ । (कम्पनी ऐन २०६३ दफा ६७ (३)(क), (ख)
कम्पनी साधारणसभाको अधिकार
१८ चैत्र २०७५, सोमबार ०६:३६
शेयर होल्डरहरूको साधारणसभा : कस्तो अवस्थामा विशेष साधारण सभा हुन्छ ?
२८ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०५:११